Wararka - Sanadihii la soo dhaafay, koritaanka warshadaha dharka ee Shiinaha ayaa gaabis ah iyo noocyada dhaqanka ee da'da ah ...
Sanadihii la soo dhaafay, kororka warshadaha dharka ee Shiinaha ayaa gaabis ah noocyada dhaqankuna waayeel ...
Sanadihii la soo dhaafay, kororka warshadaha dharka ee Shiinaha ayaa gaabis ah, astaamaha dhaqankuna waa duqoobeen, halka noocyada soo baxaya ay badiyaa ku jiraan heerarkooda hore ee koritaanka. Isla mar ahaantaana, noocyo badan oo caalami ah oo khibrad dheeraad ah u leh R & D, naqshadeynta, kanaalada iibka iyo hawlgalka sumcadda ayaa dardar-gelinaya ballaarinta suuqa Shiinaha. Marka lagu daro magaalooyinka heerka koowaad, waxay sidoo kale kusii qulqulayaan magaalooyinka heerka labaad iyo sedexaad, iyagoo bilaabaya tartan adag oo ay la galayaan noocyada dharka guryaha lagu ganacsado waxayna ku qasbayaan shirkadaha dharka inay bedelaan ka jawaab celinta xaalada.
waxaan kusoo koobnay afarta qodob ee warshadaha xusida mudan, siday u kala horeeyaan:
Marka hore, Gelitaanka dharka jilicsan ee suuqa Shiinaha waa mid hooseeya
Qaabka ganacsi ee shirkadaha wax soo saarka dharka ee Shiinaha ayaa inta badan loo qaybiyaa wax soo saarka iyo iibinta dharka iyo qaabeynta dharka. Inta badan soo saarayaasha dharka badanaa waxay soo saaraan dharka moodooyinka caadiga ah tiro aad u tiro badan. Dharka loo habeeyay, dhinaca kale, wuxuu u baahan yahay in loo habeeyo iyadoo loo eegayo xaaladda shaqsiyadeed ee macaamiisha gaarka ah. Waxaa loo soo saaray si shaqsi ah oo ku saleysan iibka. Ma jiraan wax qatar ah, laakiin miisaanka hawlgalku wuu yar yahay.
Marka labaad, Waxaa jira saddex nooc oo ganacsiyo u gaar ah dharka guryaha
Waqtigan xaadirka ah, shirkadaha u qaabeynta dharka gudaha badanaa waxay u qaybsan yihiin laba qaybood: marka hore, waxaa jira istuudiyaha isboortiga ama noocyada naqshadeeye, Habaynta noocan ah waxay leedahay wareeg wax soo saar dheer, qiime heer sare ah, koox macaamil bartilmaameed heer sare ah iyo Waxaa raacaya qaar ka mid ah noocyada dharka si loo horumariyo khadadka dharka caadada u ah, badanaa macaamiisha kooxeed ee ku jira dufcad yar, kakanaanta kakanaanta adeegyada gaarka ah, sida dirayska dugsiga.
Seddexaad, Xaaladda horumarka ee Shiinaha dhexdiisa dharka dharka ballaaran
oo ay saameyn ku yeelatay heerka isticmaalka iyo waqtiga horumarka gaagaaban, in kasta oo aqbalida fikradda u-habeynta dharka ay si tartiib tartiib ah u soo hagaageyso, ma jiro astaan ​​qaran oo ku saabsan dhanka mideynta dharka ballaaran, suuqa gudahana weli ma ahan mid aad u bislaaday.
Marka laga hadlayo kaqeybgalayaasha warshadaha, qaar ka mid ah soosaarayaasha dharka ayaa bilaabay inay soo galaan aagga qaabeynta tirada badan ee dharka gaarka loo leeyahay Warshadaha ayaa bilaabay inay fuliyaan ganacsi dhar u gaar ah, iyo shirkadaha ku taxan oo sameeyay guulo gaar ah (ama lagu taxay) badanaa
Tan afraad, Is-diidmada ka dhexeysa xogta soo saareysa iyo wax soosaarka caqliga leh ee wax looga qabanayo gaar ahaanshaha iyo cabirka